Semalt: Nzira Yokudzivirira Nayo Site Yako Kubva kuMuchinjikwa KweScript Scripting
Nzvimbo dzakawanda dzekutsvaga paIndaneti dzinokanganisa kuedza. Inenge munhu wose ane webhusaitinokuti anopfuura gore aine kana kuti achaona kuedza kunyorera. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vazhinji vari pangozi. Blogger nevaridziyewe e-commerce websites inofanira kuchenjerera kune idzi fictions kurwisa uye kugadzirisa zvimwe zvekukanganisa kwekodhi, izvo zvinokonzera kuedza kwekugadzirisa uku.Nyaya dzakawanda dzepaIndaneti dzekuchengetedza nyaya dzinosanganisira vatengesi vanoedza kuwana mukana usina kubvumirwa kupinda mawebsite uye kuwana ruzhinjiruzivo, ruzhinji rwavo runotarisana nevanotengesa data sekadhi rechikwereti. Vamwe vanokanganisa vanogona kuita zviito zvisiri pamutemo zvakadarosekutsika pasi webhusaiti kana kuunza nzira dzisina kukodzera dzemakwikwi mu-e-commerce platform - no deposit bonus allowed.
Chimwe chezvinhu zvakanyanya kupararira kushandiswa kwewebhu ndeyoSwit-site Scripting (XSS)kurwisa. Izvi zvinosanganisira muchengeti-yecode code injection attack, iyo inoshandiswa pakushandura zvikwangwani kune webhusaiti kana webhutisiti yekushandisa uchishandisadirect text input input. Nhamba yekodhi yekubhadhara inoita mabasa akasiyana mukati memuviri wekodhi pamwe nekuita shanduro yevakuvadzwa kutumiranhamba kune imwe nzvimbo isingazikamwi nzvimbo inozivikanwa chete kune hacker.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira Semalt ,inopa kuti iwe uone nzira dzakasiyana-siyana kuti ino script ye java inoshanda sei uye kuti inodzivirira sei webhusaiti yako kubva pakurwisa uku:
Cross-site Scripting (XSS) kurwisa
Mune zvimwe zviitiko, Cross-site Scripting (XSS) kurwisa kunogona kutora mushandisi wosecookies. XSS inyanzvi inyanzvi yekugadzira, uye inogona kuita kuti shanduro ive yakavhara. Somugumisiro, iwe unofanirwa kufungamune zvimwe zvirongwa zvewebsite yako kuti uzvidzivirire kurwisana neXSS.
Kune chero nzvimbo ye-e-commerce, zvakakosha kuchengetedza nzvimbo yako pakurwisanasezvo Cross-site Scripting (XSS) inorwisa. Izvo zvinoshandiswa ndeye-client-side code injection attack, iyo inongoita kuti webhusaiti iite nyore asiuyewo mushandi wekupedzisira. Munhu anokanganisa anogona kukwanisa kunyora script pane sevha, iyo inogona kuita kuti vawane ruzivo rwehupfumi hwemashoko. Dzimwe nzirakudzivirira Cross-site Scripting (XSS) kurwisa kuripo pane izvi zvinotungamirirwa. Iwe unogona kukwanisa kuita kuti webhusaiti yako yakachengeteka kubva ku XSSkurwisa uyewo kuchengetedza kuchengeteka kwevatengi vako kune vanokuvadza.